Orinasa fiompiana alika sy vozona - Mpanamboatra sy mpamatsy entana an-tsokosoko any Shina
Tena mahafinaritra ireo biby fiompy, ary te handray ireto biby fiompy mahafinaritra ireto ny mpampiantrano rehefa mivoaka any ivelany. Raha tsy misy leashes alika sy vozon'akanjo, ny alika dia mety mandeha any amin'izay tiany aleha. Noho izany, ny vozon'akanjo sy leashes alika dia napetraka ho an'ny biby fiompy, izay azo ampiasaina amin'ny fampiofanana, fandehanana, fanaraha-maso, famantarana, lamaody, fanomezana fampiroboroboana na tanjona hafa. Ny fitaovana misy azy ireo dia ny tady nylon fakana tahaka ny tenona / satin / lamba ary tady. Manjaitra fehin-kibo vita amin'ny lamba malefaka miaraka amin'ny tady nylon manahaka miaraka amin'ireo teboka taratra + hoditra PU. Mila maharitra ny fitaovan'ny kofehy, ka ny tady nylon manahaka no safidy tsara indrindra. Ary koa, ny kojakoja isan-karazany dia azo nofidiana toy ny fiarovana, fiarovana azo antoka, tsipika plastika, farango carabineer ary kojakoja namboarina manokana. Na raha afaka manampy fitaovana hafa tsy mandeha amin'ny laoniny hafa ianao dia tsy maninona. Mikasika ny sary famantarana, ny dingana samihafa dia azo fidina ao anatin'izany ny fanontana silkscreen, fanontana offset, logo sublimated na tenona. Ny halavany dia manana ny habeny mahazatra, fa raha manana ny habeny namboarina izy dia raisina an-tanan-droa ihany koa. Raha mbola manana fisalasalana hafa ianao, avelao izahay ary avelao izahay hanome ireo sosokevitra arak'asa. Atsaharo ny fisalasalana ary mifandraisa aminay avy hatrany.